वास्तु अनुसार कहाँ हुनुपर्छ तपाईंको सुत्ने ओछ्यान ? जान्नुहोस् | Mero Jyotish
वास्तु अनुसार कहाँ हुनुपर्छ तपाईंको सुत्ने ओछ्यान ? जान्नुहोस्
शास्त्रमा वास्तुको दिशाहरुलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो भनिन्छ कि घरको दक्षिण दिशाको जमीन केहि उच्च हुनुपर्छ। ओछ्यान वा सुत्ने कोठा घरको एक यस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ जहाँ व्यक्ति आफ्नो दिनभरिको थकान मेटाउन सकोस् र बिहान उठ्दा उसलाई एक नयाँ उर्जाको अनुभव हुन सकोस् ।
सुखी जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि सुत्ने ओछ्यान ठीक ठाउँमा होस् । यसका साथै तन्नाको रङ्ग र डसना आदि पनि सहि हुनु उस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी कुराहरु नमिल्नाले असफलता, झगडा, तनाव र स्वास्थ्य बिग्रिने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। वास्तुमा, यो विश्वास गरिन्छ कि अग्निदेव घरको दक्षिण-पूर्व दिशामा बस्छन्।
वास्तुका अनुसार यो विश्वास गरिन्छ कि यदि ढोका अगाडि खाट वा पलंग छ भने त्यसले वास्तु दोष उत्पन्न गर्दछ। यस कारणले गर्दा घरमा आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव र शरीरमा रोगहरू हुने सम्भावना हुन्छ। यस बाहेक, ढोका तिर खुट्टा फर्काएर पनि सुत्न हुँदैन।
वास्तुका अनुसार खाट वा पलंगको अगाडी मिरर वा ड्रेसिंग टेबल हुनुहुन्न। यस बाहेक, यो भनिन्छ कि सुत्ने बेलामा आफ्नो छाया देखिनु हुँदैन। यसो गर्दा पति र पत्नीको सम्बन्धमा असर पर्छ। धेरै प्रकारका रोगहरूको सम्भावना पनि बढ्छ।
कोठामा फलामको खाट वा पलंग नराख्नुहोस्, सँधै काठको खाटको प्रयोग गर्नुहोस्। काठको फर्नीचर वास्तुमा राम्रो मानिन्छ। यस बाहेक, ओछ्यानको उचाइ न त धेरै उच्च वा न्यून हुनुपर्दछ। वास्तुका अनुसार ओछ्यान आरामदायी हुनुपर्दछ।
ओछ्यानमा जानु भन्दा पहिले ओछ्यान राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्, शिरानी र ओछ्यानको तन्ना सधै सफा हुनुपर्छ, यदि छैन भने वास्तु दोषले सताउन सक्छ । यदि तपाईंको ओछ्यान ठूलो छ अर्थात् डबल छ भने, यसमा एक प्रकारको गद्दा राख्नुहोस् र दुई प्रकारको गद्दा लगाउने होइन।